Waa fikrad By King Teebhoose ah — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Maanta waxaan u dabaal tagay hoggaamiyihii ugu horreeyey ee dhaq-dhaqaaqa Xuquuqda Madaniga ah, Dr. Martin Luther King Jr. Rabbigu wuxuu ninkan loo isticmaalaa in lagu dhiirrigeliyo quruun, iyo guuraan dadka dhinaca sinaanta. Waxaa weli ka shaqeeyo in la sameeyo, laakiin uu ahaa mid qiimo leh. geesiga No waa qumman yahay, iyo Dr. King ahaa marka laga reebo lahayn, laakiin waxaan jeclahay isaga siyaabo badan oo aan u waxyoonay by uu dhaxalka. Halkan jira saddex waxyaalood oo ku saabsan naftiisa in loo Waxyoodo ahayn ii.
1. Xaraaradda for Justice
Dr. King ayaa la nalaayee by cadaalad ah in uu ahaa baahsan ee dunida, Oo noloshiisuna waxay dagaal ku qaadeen ka go'an. In Kitaabka Quduuska ah, uu ku arkay riyo Ilaah ee dunida, Oo wuxuu arkay nebiyadii oo ahaa in ku baaqaynaa in dhamaadka dulmi, oo wuxuu ahaa dareen si ay u arkaan cadaaladda in inay dhacaan. Waxaan jecel hamiday this caddaalad, oo Ilaah u barya Ilaah ay sii wadi doonto in looga shaqeeyo qalbigayga u gaar ah. Waxaan doonayaa in aan dagaalamo la dulmay iyo injiilka ku wacdiyo, rajo la'aan ah.
Inkastoo uu youthfulness, Dr. khudbado sheegid King iyo madarad aragti cad u geeyeen ah sida hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa. ugama uu dib u fadhiiso oo ka caban, Kor buu u degay oo uu hogaaminayo. Waxa uu ahaa cad oo ku saabsan waxa uu u maleeyay caawin lahaa dadka madow uu horay u socdo, oo wuxuu qabtay oo kaxeeyey dadka kale jihada in. Tani waxay keentay in iska caabin ah oo aan rabshado in ka caawiyay weligiis beddelo Maraykanka. Waxaan oo dhan ka noocan oo kale ah hoggaanka baran karaan. Vision waa qiimo leh oo kaliya marka la guursaday in hoggaanka. Waxa uu hoggaanka ka caawiyay lagu tusay inay dhacaan.
Dabcan, uu dagaal aan la kulmay dhoolo oo duuban. Waxa uu naftiisa biimeeyey mar kasta oo uu socotay, hadlay, ama digay. Wuxuu ogaa waxa uu sameynayo ahaa khatar, haddana weli wuu lahaa geesinimada inuu naftiisa gelin on line ee dadka uu. Mucaaradka uu la kulmay ma hadhaysaa riyadiisii, ama dejinaaya uu hoggaanka. Waxa kaliya xusuusiyay isaga sababta uu dagaalka. Waxaan Ilaah ka baryayaa in Rabbigu ii in shaqayn lahaa geesinimada ah Saacid in uu u taagan yahay boqortooyada iyo dagaalama, waayo, Ammaantiisu.
Waxaan rajaynayaa in aad u waxyoonay by uu tusaale ahaan iyo sidoo, oo waanan rajaynayaa inaad igu biiri doonaa in Ilaah weynaynaya waxa uu dhammaado dhex Dr. King.
Pstan26 • August 19, 2013 at 8:28 waxaan ahay • Reply
Dad badan ayaa laga badiyay uu fariin, farxi ma lumo aad on Super Duper
Waayo, jacaylka Nigeria • August 19, 2013 at 8:29 waxaan ahay • Reply
Isaga oo nolosha ayaa si xaqiiqo ah la heer, Waxaan oppurtunity this loo isticmaalo si aad u codsato na si ay u tukadaan Nigeria, xataa sida aan ka dhigi our talooyin ku aaddan dagaalka ee Nigeria ee riyooyinkayagii, waxa ugu dhakhsaha badan noqon doonaa mid dhab ah
Tamiehicks • August 19, 2013 at 8:30 waxaan ahay • Reply
Thanks for Trip share'n
Dan Smith • August 19, 2013 at 8:30 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan oggolahay inaan aragti in aan hoggaanka wuu baabba'ay. Waa mid aad u xun, maxaa yeelay, waan hubaa waxaa jiray dhowr qof oo jeerba baahida loo qabo xuquuqda madaniga ah, iyo xitaa sida ay u imaan karaan oo ku saabsan, laakiin sababta oo ah waxay u baahnaydeen tayo hoggaamineed, ay maanta ma ay xusuusan. Waxaa la mid ah kaniisadda. Waayo, xataa hoggaamiye kasta oo xoog leh iyo aragti waxaa shaki la'aan jira kumanaan kuwa keliya aragti.